सुरक्षाको लागि भजन prayer १ प्रार्थना पोइन्ट्स प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स सुरक्षाको लागि भजन 91 १ prayer प्रार्थना पोइन्टहरू
सुरक्षाको लागि भजन 91 १ prayer प्रार्थना पोइन्टहरू
भजन :91 १: १::
उहाँ जो उच्चको गोप्य स्थानमा बसिरहनुहुन्छ सर्वशक्तिमानको छायामा रहनेछ।
को पुस्तक भजनहरू यो ग्रह र पछाडिको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रार्थना पुस्तक हो। प्रत्येक विश्वासी जो आफ्नो प्रार्थना जीवनमा परमेश्वरको कच्चा अभिव्यक्ति हेर्न चाहन्छन् भजनको पुस्तकको फाइदा लिनुपर्दछ। आज हामी सुरक्षाको लागि भजन 91 १ prayer प्रार्थना पोइन्टहरूमा संलग्न हुनेछौं। भजन 91 १ को पुस्तक यसको लागि प्रार्थना हो सुरक्षा भजन विश्वासीहरूको हैसियतमा हामी जहिले पनि होसियार हुनुपर्छ र शैतान वा त्यसका मानवीय एजेन्टहरूले हामीलाई अचम्ममा नपर्न दिनुहोस्।
जब भजनसंग्रहको सुरक्षाको कुरा आउँछ तब भजन 91 १ को भारी बोक्ने बन्दूक हुन्छ। भजन 91 १ को माध्यमबाट, सुरक्षाको लागि धेरै शक्तिशाली प्रार्थना पोइन्टहरू निकाल्न सकिन्छ। आज, म तपाईंलाई सुरक्षाको लागि शक्तिशाली भजन 91 १ प्रार्थना बिन्दुहरू बाहिर निकाल्दैछु।
यो प्रार्थना पोइन्टले तपाईंको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिलाई तल झार्छ, र तपाईंको विश्वासको माध्यमबाट, तपाईंको जीवनमा दुश्मनका सबै पक्षीहरू येशूको नाममा पल्टिनेछ।
सुरक्षाको लागि प्रार्थना किन?
हामी आज एउटा दुष्ट संसारमा बाँचिरहेका छौं, र शैतानले कुनै प्रकारको दयालु अनुभव पाइरहेको छैन। अन्धकारको आक्रमणबाट बच्न सक्ने प्रत्येक विश्वासीले गहन प्रार्थना र वचनको आत्मिक समझलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। बाइबलले फाउलरको पासोको बारेमा कुरा गर्छ (भजन 91 १:)), यसको मतलब शत्रुको पासो हो। शैतान विश्वासीहरूका लागि सबै जालहरू सेट गर्नमा व्यस्त छ, उदाहरणका लागि सम्बन्ध जाल, धेरै क्रिश्चियनहरू गलत विवाहमा फस्छन् र गलत व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँ पनि छन्। पैतृक पासोहरू, जहाँ विश्वासीहरू पुर्खाहरूका शक्ति र राक्षसी शक्तिहरूसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। बाइबलले आतंकको बारेमा पनि बताउँदछ, रातमा, तीरले, र अँध्यारोमा हिँड्ने महामारी, यी बिभिन्न आत्मिक आक्रमणहरू हुन् जुन विश्वासीहरूलाई नरकको खाडलबाट फ्याँकिन्छन्।
यस दुष्टतालाई शैतानी एजेन्टहरू र आसुरी व्यक्तिहरूले बोक्छन्, यसैले तपाईं बोक्सीविद्याको हमला र अजीबोगरी रोगहरू, बिरामीहरू जसलाई चिकित्सा निदानको माध्यमबाट पत्ता लगाउन नसकिने गरी मरेको देख्नुहुन्छ। सुरक्षाको लागि यो भजन 91 १ प्रार्थना पोइन्ट्स, तपाईंले प्रार्थनापूर्वक तपाईंको जीवनमा सुरक्षाको पर्खाल निर्माण गर्दा तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। आज देखि, कुनै पनि शैतान वा शैतानी एजेन्टहरू तपाईंको नाममा येशूको नाममा विजय पाउन सक्दैनन्। आज यी प्रार्थनाहरू विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुहोस् र ईशुसको नाममा तपाईंको जीवनमा ईश्वरीय सुरक्षा हेर्नुहोस्।
भजन 91 XNUMX प्रार्थना पोइन्टहरू
१. बुबा, म आफूलाई आज तपाईंको गोप्य ठाउँमा र तपाईंको छायाँमुनि यीशुको नाममा ल्याउँछु
२. बुबा, आज मँ भन्छु कि तपाईं मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ र जेससको नाममा मेरो किल्ला हुनुहुन्छ
I. म आज येशूको नाममा रातको त्रासबाट आफूलाई बचाउँछु
Me. राती मेरो विरुद्धमा पठाइएका सबै राक्षसी आक्रमणहरू येशूको नाममा आगोले भस्म हुन्छन्
Every. प्रत्येक दुष्ट गिरोह माथि वा मेरो विरुद्धमा षड्यन्त्र र गिरोह येशूको नाममा शून्य र शून्य प्रस्तुत गरिएको छ।
I. म जेससमा दिनहुँ उड्ने हरेक तीरहरूबाट आफूलाई बचाउँछु
Every। प्रत्येक राक्षसी एजेन्टहरू दिनहुँ ममा तीरहरू पठाउँछन्, येशूको नाममा प्रेषकलाई फिर्ता फर्कनेछ
St. स्थिरताको हर तीर येशू नाममा प्रेषकलाई फिर्ता फर्किनेछ
Un। असामयिक मृत्युको प्रत्येक एर्रो येशूको नाममा प्रेषकलाई फिर्ता फर्कनेछ
१०. वैवाहिक स्थिरताको हर तीर येशू नाममा प्रेषकलाई फिर्ता फिर्ता आउनेछ
११. म जेसनको नाममा दिउँसो आक्रमण गर्ने हरेक विनाशबाट आफूलाई जोगाउँछु
१२. म प्रभुका दूतहरूलाई दिनहुँ मभन्दा अघि जान्छु र येशूको नाममा हुने हरेक किसिमको विनाशबाट बचाउन चाहन्छु।
हे प्रभु, येशूको नाममा मेरो आध्यात्मिक संवेदनशीलता बढाउनुहोस्।
२० हे प्रभु, मेरा आँखा र मेरा कानहरू अभिषेक गर्नुहोस् ताकि तिनीहरूले येशूका नाममा स्वर्गबाट ​​अचम्मका कामहरू देखून् र सुन्न सकून्।
२१. म येशूका नाममा मेरा सबै सद्गुणहरूको बदली गर्न डराउँछु।
२२. येशूको रगत, दुष्ट शक्तिहरूको उडान मार्ग रोक्नुहोस्, मलाई निशाना बनाउनुहोस्।
२ life. मेरो जीवनमा दुश्मनले जे रोपेको छ, बाहिर आऊ र येशूको नाममा मर्छ।
२ of. येशूको रगत, येशूको नाममा मेरो भाग्यविरूद्धको हरेक शैतानी दीक्षालाई रद्द गर्नुहोस्।
अघिल्लो लेखमाPower० शक्तिशाली जन्मदिन प्रार्थनाहरू
अर्को लेखमाअन्यायपूर्ण शत्रुहरू विरुद्ध भजन 35 XNUMX प्रार्थना बिन्दुहरू
.. मार्च 19, 20207मा: 34 बिहान
Ij अप्रिल २,, २०१ At अपराह्न २::15
jacquelynjones डिसेम्बर २,, २०१ At ११::7। अपराह्न
धन्यबाद तर मलाई मनपर्दछ - यदि तपाईं धर्मशास्त्रलाई हरेक बिन्दुमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ र प्रार्थना बिन्दुको लागि सबै बुँदाहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ किनकि म एक विश्वासी हुँ किनकि उहाँलाई परमेश्वरको वचन उद्धृत गर्दै छु। पोष्टहरुमा रमाईलो। धन्यबाद
Kamila मे,, २०१ 23::2021१ अपराह्न
धम्की दिए गर्भपातको लागि १०० प्रार्थना
प्रार्थनाको बारेमा powerful० शक्तिशाली बाइबल पदहरू